KXStudio: Iyo Distro yeVanyanzvi Vagadziri Vagadziri | Kubva kuLinux
KXStudio: Iyo Distro yeVanyanzvi Vagadziri Vagadziri
Munyika yeLinux mune ma distros ezvese zvido uye zvido, saka zvinogara zvirinyore kutsvaga izvo zvinonyanya kukodzera zvaunofarira uye zvaunokoshesa, uchifunga kuti chero distro inogona kuchinjiswa kuti iite uye ive nehunhu zvaunoshuvira.
ari vagadziri vedhiyo varairidzi vane yavo distro inonzi Vadivelu Comedy KXStudio iyo inouya yakashongedzerwa nehunyanzvi software munzvimbo ino, pamusoro pekunatsiridza sisitimu yekugadzirisa odhiyo kuti inakidze uye ibudirire.
1 Chii chinonzi KXStudio?
2 KXStudio Zvimiro
Chii chinonzi KXStudio?
Vadivelu Comedy KXStudio Icho chakakura zvakakwana distro byakakangwa paUbuntu 14.04.5 LTS, iyo yakanangana nehunyanzvi hwekugadzira odhiyo, iyi distro yakagadzirirwa hombe kuunganidzwa kwemapurogiramu nemapulagi izvo zvinobvumidza kurongeka kwekuteerera odhiyo kana kugadzirwa nemhando yepamusoro indasitiri.
Vadivelu Comedy KXStudio ipfungwa izere, uko kusarudzwa kwe Yeyake neyechitatu-bato kunyorera zvakasarudzika mukuteerera kweodhiyo, Yakawedzerwa kune a dzakasiyana-siyana dzakavhurika sosi plugins kukwidziridza odhiyo performance muLinux kernel uye a repository nzvimbo yeDebian / Ubuntu panochengeterwa up-to-date zvikumbiro. Ichi ndicho chikonzero KXStudio inogona kunakidzwa seyese-inosanganisira distro, kana seyakaiswa iyo inogona kuiswa pane yako yaunofarira distro kuti ubatsire zvikumbiro zvine chekuita nekuteerera kugadzirwa.
Saizvozvo, Vadivelu Comedy KXStudio ine rutsigiro rukuru rwekugadzirwa kwe audiovisual, iine nema default application ekugadzirisa vhidhiyo, kugadzirwa kwema audiovisual uye kugadzirisa kernel kuwedzera mashandiro muhurongwa hwekuunganidza.
Iyo interface yeiyo KXStudio distro yakanaka kwazvo ine magumo akagadzirirwa kupesana nemaodhiyo ekushandisa, iyo desktop desktop inoshandiswa ndeye KDE uye iyo distro inosimudza inonakidza kwazvo.
Distro zvichibva paUbuntu 14.04.5 LTS game KDE desktop nharaunda.
Iyo ine muunganidzwa wakakura wekushandisa uye plug-ins yehunyanzvi odhiyo uye vhidhiyo yekugadzira.
Kunatsiridzwa mumachiteshi eLinux uye kubatanidzwa kwezvimedu zvebasa riri nani, zvakare kuwedzera kuenderana neakawanda mashandiro.
Yako yenzvimbo yekuchengetera Debian uye Ubuntu, ine zvinoshandiswa uye mapulagini anogona kushandiswa mune chero distro.
Iyo ine inotevera inotevera odhiyo uye vhidhiyo yekugadzira ekushandisa: Cadence, Cadence-JackMeter, Cadence-JackSettings, Cadence-Matanda, Cadence-Render, Cadence-XY Mutungamiriri, Catarina, Catia, Claudia, Claudia -Launcheruye Carla, imwe neimwe yadzo yakatsaurirwa kupa kuvandudza uye nyowani mashandiro eodhiyo manejimendi, ese akavhurwa sosi uye anowanikwa kune akasiyana distros.
Inosanganisira akasiyana maLinux plugins nemachiteshi ayo anowanikwa kubva ku dunhu, kuwedzera kuenderana nemamwe maturusi.
Simba rayo inzvimbo yemultimedia, saka mumenu yekushandisa yenzvimbo ino unogona kuwana zvikumbiro zvakagoverwa muodhiyo plugin, kugadzirwa kweaudio, maturusi edhiyo, dhisiki dhizaini, multimedia Hardware kumisikidza, multimedia players, vhidhiyo kugadzirwa , Kunyorera kwaCadence uye kutanga kwaClaudia.
Iyo ine mafomu ekushandisa kwakawanda senge hofisi otomatiki, mabhurawuza, edhita yemifananidzo, mufananidzo anotora, odhiyo uye vhidhiyo, pakati pevamwe.
Pasina kupokana, iyi distro ine simba ine ruzivo rwemakore akati wandei sarudzo yakanakisa yeavo amateurs kana nyanzvi dzekugadzirisa odhiyo uye vhidhiyo. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti isu tinogona zvakare kunakidzwa nemaapplication uye mawedzera-ons e Vadivelu Comedy KXStudio mune edu eanodiwa distros nekutenda kune ayo ekuchengetera, saka zvisinei nezvaunoshandisa iwe unogona kuishandisa kuzadzikisa uye kuwedzera matsva maficha kune ako aunofarira kugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » KXStudio: Iyo Distro yeVanyanzvi Vagadziri Vagadziri
Ndakaiyedza mwedzi yakati wandei yapfuura. Uye inoshanda chaizvo. Asi iyo yakaipa poindi ndeyekuti yakavakirwa pane distro iyo yatove nemakore mashoma uye haina kushanda zvakanyatsondinakira mune rimwe razvino kabhuku. Izvo zvishandiso zvainounza zvinoshamisa! Cadence, Claudia, Carla .. Kunyangwe sekutaura kwandakamboita, ndichivakirwa pa14.04 ndakanetseka zvakanyanya kuti ndiise iyo Wi-Fi, iyo ine 16.04 isina kuitika kwandiri. Asi kana yako laptop isiri isingawanzoitika, uye iwe ukaishandisa kuunza mimhanzi ... iwe unofanirwa kuyedza! Iwo maficha anoshanda kekutanga, pasina kunonoka, kana chero chinhu!
Pindura kuna eljorge21
Hazvina kufanana kana kufanana neBuntu Studio?
Zvakanaka kwazvo, vese vaimbi vanofanirwa kuzviedza, asi ...
Washaiwa ruzivo, (Kunyangwe ichionekwa) kutaura kuti i KDE, kuti kernel ndeyeNguva Yechokwadi (RT) sezvazviri muStudio distros nekuti inonyatso gadzira kugadzirwa kweaudio, uye kuti iyo RT yeiyo lnux kernel iri nani pane iyo kwete RT kubva kuMMS WOS kana OSX kernels. Iyo zvakare ine yakanyatso gadzirirwa mimhanzi peripheral yekubatanidza plugins iyo iri musoro kana iwe uchida kuisa nekugadzirisa ivo wega.
Katsi yeLopez akadaro
Zvakanaka, zvinonakidza ... ndinofanira kuita yakawanda multimedia basa, uye zvingave zvinonakidza kuyedza
Kubva pane zvandinoona uye zvandisingade, iri vhezheni yechina yeKDE inotyisa kusvika zvisingagone
Kune vamwe vese, ini ndinogona kuzviedza
Pindura El Gato López
Inogona kuiswa pamushini wekare ?????
Ndine muchina une 512 mb yegondohwe, uye ndiri kufunga kuisa Linux pairi ... Zvimwe zvinoshanda.
Pindura kune 3d
Mupiro wakanaka kwazvo. Ini ndinoshandisa OpenSUSE asi ini ndakaigadzira ("neruoko") kuti ndikwanise kushandisa Jack uye zvinondishandira, asi chi "chazvino" chishandiso ("neruoko" futi, hahaha), saka iyo KXStudio sarudzo yemidziyo ine mwero isina mira kuve kune wehunyanzvi munda, ini ndinofunga idanho rakakura.
Ini ndinochema zuva rega rega kuti ivo KX vakomana vaburitse nyowani distro. Kurira paLinux kwaigara kuchityisa, kune njodzi, kwakaoma, uye kunetsa; Pakarepo KXStudio yakaonekwa uye maturusi ayo akaunza mweya wemhepo mutsva kuruzha muLinux, asi usafare, canonical nekambani vatova kuisa zvipingaidzo kunzvimbo dzeKX
mune focal fossa zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka
uye izwi iri zvakare rinotyisa gibberish
Usaite zvisizvo Linux, yakanaka kuhofisi, uchiona bhaisikopo, kutarisa email, kunyora tsamba
Kune zvese zvimwe zvinhu, hapana ruvara, mahwindo, kunyangwe paine chishuwo chekuti isu tese titumire kune avo vari mu redmond a la m….
Wedzera Bing Wallpapers otomatiki muDebian uye zvigadzirwa
Maitiro ekushandura .bmp mifananidzo ku .jpg